व्याकरण र व्याकरण जाँच व्याकरणसँग Martech Zone
यदि तपाईं एक पाठक भएको छ Martech Zone केहि समयको लागि, तपाईंलाई थाहा छ कि म सम्पादकीय विभागमा धेरै सहयोग गर्न सक्दछु। यो होइन कि म हिज्जे र व्याकरणको ख्याल राख्दिन, म गर्छु। समस्या एक बानीको अधिक हो। वर्षौं देखि, म फ्लाई मा हाम्रा लेख लेख र प्रकाशित गर्दैछु। तिनीहरू अनुमोदनको धेरै चरणहरूमा जान सक्दैनन् - तिनीहरू अनुसन्धान गर्दै, लेखिएका, र प्रकाशित हुन्छन्।
दुर्भाग्यवस, यसले मलाई केही अप्ठ्यारो निम्त्याएको छ किनकी मैले केही हास्यास्पद प्रकाशित गरेको छु व्याकरण त्रुटिहरु वर्षौंदेखि। मैले हाम्रा प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरूसँग पनि कुरा गरें कि तिनीहरूलाई प्रत्येक दिन मेरो पोष्ट समीक्षाको लागि रिटेनरमा राख्नुपर्छ। जे होस्, म प्रकाशित गर्न पर्खिन चाहन्न त्यसैले म यसलाई बन्द गर्दैछु। यो तथ्यलाई उल्लेख नगरी कि मलाई उनीहरूको सिफारिशहरूले मेरो कामको स्वर परिवर्तन गर्ने तरीका पनि मनपर्दैन। मैले इमान्दारीसाथ सम्पादन मार्गमा जान अस्वीकार गरें साथै, म धेरै लेख लेख्छु कि मलाई अंग्रेजी भाषाको मेरो कमान्ड सुधार गर्न आवश्यक छ।
कतिवटा व्याकरण र हिज्जे त्रुटिहरू मानिसहरू अनलाइन बनाउँछन्?
म एक्लो छैन! व्याकरण एक अरब भन्दा बढी शब्दहरूको विश्लेषण गरियो एक महिनाको अवधिमा उनीहरूको लोकप्रिय लेखन अनुप्रयोग द्वारा प्रुफरीड। उनीहरूले के पत्ता लगाएः
व्यक्तिले सोशल मिडिया पोष्टहरूमा प्रति १०० शब्दमा औसत mistakes mistakes गल्ती गरे। ईमेलहरू १०० शब्द प्रति १ 39 गल्तीहरूको साथ अनुसरण गर्दछ र ब्लग पोष्टहरू १०० शब्दहरूमा .100. mistakes गल्तीहरूसँग सबैभन्दा कम हुन्छ।
व्यक्तिहरू हामीसँग कुनै पनि अन्य प्रकारका अनलाइन लेखनमा भन्दा तीन गुणा बढी सामाजिक मिडिया पोष्टहरूमा गल्तीहरू गर्ने गर्दछन्। म अनुमान लगाउँदै छु कि यसमा केहि ट्विटरको सीमितताहरू छन् (कुनै सम्पादन छैन) र सामाजिक मिडियाको कुराकानी प्रकृतिसँग।
प्रारम्भिक चराहरूले बिहान :4:०० बिहान 00:०० बिच लेखन रातको उल्लूको भन्दा १.8.२% कम गल्ती गरे भने बेलुका १०:०० र बिहान २:०० बिचको लेखन। (ओहो)
शीर्ष व्याकरण र हिज्जे त्रुटिहरू के हुन् व्यक्ति अनलाइन बनाउँछन्?
अपोस्ट्रोफ गल्तीहरू (जस्तै, आउनुहोस् पद अनुमति दिन्छ)
धेरै पद लाई
दैनिक पद हरेक दिन
त्यहाँ पद उनीहरुको
भन्दा पद त्यसपछि
तपाईले यस क्षेत्रमा केही सुधार देखिरहेको हुनसक्दछ, किनकि मैले वार्षिक इजाजतपत्रमा लगानी गरेको छु Grammarly, एक सेवा जुन प्राय: विश्वको सर्वश्रेष्ठ व्याकरण परीक्षकको रूपमा चिनिन्छ। ब्राउजर विस्तारको साथ पूर्ण, मँ चाँडै लेख्न सक्दछु र त्रुटिहरू सच्याउन सक्छु कहिल्यै मेरो सम्पादक छोडे बिना।
व्याकरण: उत्तम व्याकरण र हिज्जे जाँच प्लेटफार्म
Grammarly कुनै सेवा जुन म कुनै प्लेटफर्म वा सफ्टवेयरको साथ प्रयोग गर्न सक्दछु। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
व्याकरण सम्पादक - व्याकरण जाँचको सम्पादक शानदार छ, हिज्जे-जाँचहरू, व्याकरण जाँचहरू, साहित्य चोरी, श्रोता सिफारिशहरू, औपचारिकता जाँच, पठनीयता, टोन पत्ता लगाउने, आशय, समग्र अoring्क, लक्ष्य, शब्द सुझाव, सुरुचिपूर्ण प्रतिस्थापन, शब्द गणना, वाक्य लम्बाइ, र अधिक।
व्याकरण डेस्कटप अनुप्रयोग - व्याकरणको एक स्वसंपूर्ण अनुप्रयोग छ जुन कुनै पनि अपरेटिंग प्रणालीमा चल्दछ। यो वेब आधारित प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईं आफ्ना सबै कागजातहरूको भण्डार कायम गर्न सक्नुहुन्छ।
आईप्याडका लागि व्याकरण - व्याकरणको एक स्वसंपूर्ण अनुप्रयोग छ जुन आईप्याडमा चल्दछ।
व्याकरण ब्राउजर विस्तारहरू - व्याकरणसँग शानदार ब्राउजर विस्तारहरू छन्। म सफारी विस्तार प्रयोग गर्दै छु अहिले WordPress मा 'Gutenberg सम्पादक भित्र यो लेख मा। पाठ क्षेत्रको साथ कुनै पनि वेब पृष्ठले स्वचालित रूपमा व्याकरणलाई मद्दत गर्न सक्षम गर्दछ। र सबै भन्दा राम्रो, तपाईं बिना कुनै आधारभूत आधारभूत कार्यक्षमता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
व्याकरण कार्यालय एड-इन - व्याकरणमा विन्डोज वा म्याकको लागि अफिस इन-इन हुन्छ।
व्याकरण कीबोर्ड - यदि तपाईं मोबाइल उपकरणमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो मोबाइल प्रतिलिपि मद्दत गर्न व्याकरण कीबोर्ड स्थापना र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
व्याकरण व्यापार - के तपाईंको कम्पनीसँग लेख्दा धेरै विशिष्ट शैली गाईडहरू छन्? व्याकरण व्यावासायिकले तपाइँको कम्पनी भित्र सबैलाई तपाइँको दिशानिर्देशहरू पालना गर्न मार्गनिर्देशन गर्न सक्षम गर्दछ।
व्याकरणसँग सित्तैमा सुरू गर्नुहोस्
व्याकरणसँग व्याकरण र हिज्जे त्रुटिहरूको लागि कसरी जाँच गर्ने
व्याकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ। पाठ क्षेत्रमा तपाईंले काम गरिरहनु भएको बेला तपाईंले हिज्जे र व्याकरण मुद्दाहरूलाई अधोरेखित देख्नुहुनेछ। व्याकरण आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र माथिको गहिराइ सम्पादक पप अप गर्दछ कि तपाईं आफ्नो प्रतिलिपि सुधार गर्न आवश्यक सबै जानकारी छ।
यहाँ व्याकरणले कसरी काम गर्छ भनेर एक उत्तम भिडियो छ:
यदि तपाइँको लागि यि सुविधाहरू पर्याप्त छैनन् भने, साप्ताहिक ईमेलको बारेमा कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ अरू व्याकरण प्रयोग गर्नेहरूका बिरूद्ध कत्तिको राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ? हो, तिनीहरू एक पठाउँछन्! र होईन, मैले मेरो हिस्सा सेयर गरिरहेको छैन।
नोट: म मेरो प्रयोग गर्दैछु Grammarly यस पोष्ट भर सम्बद्ध लिंकहरू।
टैग: दर्शक सिफारिसहरूप्रासंगिक हिज्जे गल्तीहरूसम्पादन उपकरणसम्पादकीय उपकरणहरू१०० शब्दहरू प्रति त्रुटिहरूऔपचारिकता जाँच गर्दछलक्ष्यव्याकरणव्याकरण अनुप्रयोगव्याकरण जाँचव्याकरण जाँचकर्ताव्याकरण जाँच गर्दछव्याकरण उपकरणव्याकरणउद्देश्यगलत हिज्जेसमग्र स्कोरिंगचोरी चोरीविराम चिह्नपठनीयताहिज्जे-चेकहिज्जे जाँचहिज्जेहिज्जे अनुप्रयोगहिज्जे परीक्षकहिज्जे उपकरणटोन पत्ता लगाउनेशब्दावलीशब्द गणनाशब्द त्रुटिहरूशब्द सल्लाह
ताजा बिक्रीहरू: एक बिक्री प्लेटफार्ममा तपाईंको व्यवसायको लागि आकर्षण, संलग्नता, नजिक र पोषण लिड्स।
मार्क्स 24, 2016 मा 4: 22 PM
म अहिले परीक्षण गर्दैछु। के त्यहाँ कुनै सुविधा छ जसले यसलाई कागजातमा html क्यारेक्टरहरू बेवास्ता गर्न भन्छ? हाल, वेबको लागि लेख्दा, म जाँदा मात्र ढाँचा गर्छु र सही व्याकरणमा फिट भइरहेको छ, विशेष गरी जब यो सूचीमा पुग्छ।
र, grr, यो कहिले Google Drive लाई समर्थन गर्न गइरहेको छ?
अन्यथा, यो अद्भुत छ।
मार्क्स 25, 2016 मा 5: 45 PM
गुगल ड्राईव एक राम्रो सुविधा हुनेछ! मैले भर्खरै व्याकरणबाट मेरो कागजातमा पप आउट गरें।